हिन्दुको लागि ५०० बर्षको सबै भन्दा ठुलो जित, अयोध्यामा बनिने भयो विश्वकै ठूलो राम मन्दिर ! « Swadesh Nepal
हिन्दुको लागि ५०० बर्षको सबै भन्दा ठुलो जित, अयोध्यामा बनिने भयो विश्वकै ठूलो राम मन्दिर !
भारतको सर्वोच्च अदालतले लामो समयदेखि वि’वादमा रहेको राम जन्मभुमीको पक्षमा फैसला सुनाएपछि अब बन्ने राम मन्दिरको बारेमा समेत चर्चा शुरु भएको छ।
मन्दिरको गजुर २७० फीट हुने छ भने गर्भगृहको माथि विशाल गुम्वज हुने बताइएको छ। सो गुम्वजमाथि केशरी रंगको झण्डा राखिने छ। दुई तलाको बन्ने मन्दिरमा भुई तल्लामा राम रहनेछन भने पहिलो तल्लामा भगवान रामको दरवारको रुपमा सजाइनेछ। मन्दिरमा सांस्कृतिक कार्यक्रमका लागि मंडप हुनेछ भने मन्दिरको गर्भगृहमा श्रद्धालुहरुलाई परिक्रमाको सुविधा पनि हुनेछ।